Deepika Padukone Iyo Sida Ay Bollywoodka Kusoo Gashay Kuna Noqotay Atirishada Ugu Awooda Badan(Sawiro+Video) – Filimside.net
Deepika Padukone Iyo Sida Ay Bollywoodka Kusoo Gashay Kuna Noqotay Atirishada Ugu Awooda Badan(Sawiro+Video)
January 5, 2019 Ali Aadan
Taariikhda: January 5, 2019
Inaba caadi ma ahan Deepika Padukone heerkii ugu sareeyay ayay Bollywood-ka ka gaartay ganacsi ahaan iyo qaab jiliin sidoo kalena waa boqorada Bollywood-ka ee aan xiligan laga daba hadli karin.
Hadaba Deepika Padukone ayaa maanta u dabaal dageyso sanad guuradeedii 33-aad madaama ay xidigtan dhalatay 5 Janaayo 1986 waxayna ku dhalatay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
Hadaba Deepika Padukone Iyo Sida Ay Ku Noqotay Atirishada Bollywood-ka Ugu Awooda Badan Fadlan Hoos Kaga Bogo:
Sanadii 2004 Deepika oo dhalin yar waxay xayeysiin u sameesay shirkada Liril Girl ee sameyso saabuunta kala duwan waxayna xayeysiintan u noqotay mid nasiibkeeda sare u qaado.
Deepika waxaa aabo u ah Prakash Padukone oo ah cayaaryahan gudaha Hindiya caan kaga cayaarta kubada miiska ee teyniska yar.
Deepika ayadoo 18-jir ah ayay dhanka Model-ka heer wacan ka gaartay, sidoo kalena sanadii 2006 waxay kasoo muuqatay Album-kii heesaha ee lagu magacaabo “Naam Hai Tera” waxaana Album-kan iska lahaa heesaaga caanka ah Himesh Reshammiya.
Deepika muuqaalka ay Album-kan ku yeelatay waxaa aad ula dhacday Farah Khan oo cayaarta heesaha Album-kan sameesay.
Farah Khan waxay go’aan ku gaartay inay Deepika atirisho kowaad kaga dhigto filimkeedii Om Shanti Om ee Shah Rukh Khan atooraha kowaad ka ahaa lana daawaday sanadii 2007.
Deepika dadaalkeedii kuma qasaarin kadib markii ay calfatay inay atirisho kowaad ka noqoto filimkii Om Shanti Om wuxuu noqday Blockbuster weyn iyadana aqoonsi caalami ah ayay heshay sidoo kalena abaal marinta atirishada ugu wanaagsan Bollywood-ka gabdhaha ku cusub ayay shirkada Filmfare Awards siisay.
Wixii markaas ka dambeeyay Deepika waxay noqotay atirisho caalami ah oo Bollywood-ka oo dhan ka dhaxeyso waxayna sameesay aflaan hirgaleen ganacsi ahaan iyo sheeko ahaan.
Aflaanta Deepika magaca ku yeelatay waxaa ka mid ah: Bachna Ae Haseeno (2008), Love Aaj Kal(2009), Cocktail (2012), Yeh Jawaani Hai Deewani (2013), Chennai Express(2013), Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela (2013), Happy New Year (2014), Piku (2015), Bajirao Mastani (2015) iyo Padmaavat (2018).
Deepika Padukone sanadii 2013 marnaba ma iloobi karto waa sanadkii ay Bollywood-ka awood ku qabsatay sidoo kalena ay ku guuleesatay abaal marinta atirishada Bollywood-ka ugu wanaagsan waxayna ku qaadatay filimkeedii wacnaa Ram Leela.
Deepika Padukone sanadkan abaal marinta Filmfare Awards qeybta atirishada ugu wanaagsan inee ku guulesato ayaa la filaa maadama 2018 ay la timid filmkeedi ugu weynaa abid Padmaavat kaaso qaab jiliin heer sare ah kusoo bandhigtay sheeko ahaan iyo ganacsi ahaan waa mid guulestay oo Blockbuster noqday sido kalena bandhiga Deepika aad ayaa loogu amaanay…..
Waxaan leenahay dhalasho wacan Deepika Padukone atirishada Bollywood-ka ugu awooda badan……
Waxaa Aqrisay 298